Dagaalka xuduuda Sudan iyo Koonfurta Sudan - BBC News Somali
Dagaalka xuduuda Sudan iyo Koonfurta Sudan
27 Maarso 2012
Image caption Saldhigyada shidaalka ee dalka Koonfurta Sudan
inkastoo ay dooduhu aad u adag yihiin, haddana sababta dagaalkani way sahlan tahay waxaana lagu soo koobi karaa hal eray oo ah saliid.
Waxay ahayd saliidda midda shidaysay dagaal sokeeye oo tobannaan sano ka dhex socday woqooyiga iyo koofurta iyo shidaalkeeda, iyo cidda yeelanaysa ceelasha saliidda, ayaana ah waxa sii wada xiisadda iyo dagaalka labada dhinac u dhexeeya.
Dhibaatadu waxay ahayd inkastoo ay labada geesood saxiixeen heshiis nabadeed oo dhammaystiran sanadkii 2005tii oo dagaalkii sokeeye lagu soo afjaray, haddana maqaamka deegaanka Abyei, oo ah meel ay ku yaalliin ceelal badan oo saliideed, marnaba go'aan lagama gaarin, xadka labada dal u dhexeeyana marna si buuxda looma calaamadin.
Hase ahaatee kaddib rayn-rayntii madaxbannaanida koofurta iyo xiriirka labada dhinac oo dhalaalay, arrimihii aan xalka laga gaarin ayaa dib u soo noqday. Waxaa la rabay in dadka reer Abyei ay afti samaystaan ay mustaqbalkooda go'aan uga gaaraan laakiin taas dib ayaa loo dhigay.